Maxay Ahayd Sababtii Dhabta Ahayd Ee Uu Gary Neville Salaanta Uga Qaadi Waayay Saaxiibkiisii Man United Ee Peter Schmeichel? Neville Oo Ugu Danbayn Sharaxaad Buuxda Bixiyay. - GOOL24.NET
Gary Neville ayaa ka mid ah khabiirada kubbada cagta England waqti xaadirkan ugu saamaynta badan isaga oo hore waqti cajiib ah ugu soo qaatay xulka qarankiisa England iyo waliba kooxdiisii hore ee Manchester United. Inkasta oo uu Neville ku soo fashilmay shaqadiisii tababaranimo ee ugu horaysay oo uu Valencia ka qabtay, haddana waxa uu shaqo fiican ka hayaa Sky Sports.
Gary Neville ayaa ugu danbayn faah faahin buuxda ka bixiyay sababtii uu salaanta ula dhaafay xidigii ay Manchester United waqtiga fiican ku soo wada qaateen ee Peter Schmeichel wuxuuna Neville arintan ku muujiyay saddex kooxood oo uu necaybka ugu badan u hayo.
Kadib markii uu goolhaye Peter Schmeichel waqti cajiib ah ku soo qaatay Manchester United waxa uu sheegay in uu ciyaaraha ka fadhiisanayo laakiin waxa uu kadib ku biiray kooxda Manchester City taas oo noqotay sababta dhabta ah ee uu Neville ku sheegay in uu u gacan qaadi waayay Peter Schmeichel.
Ka hor kulankii Manchester Derby ee 2002 kii waxa uu Gary Neville iska diiday in uu gacan qaado saaxiibkiisii Manchester United ee Peter Schmeichel kaas oo markaas u safanayay kooxda ay colaada wayni ka dhexayso United ee Man City.
Haddaba Gary Neville oo sharaxaya sababtii dhabta ahayd ee uu goolhaye Peter Schmeichel u gacan qaadi waayay ayaa yidhi: “Marka aad hadda gadaal u eegto ee aad 43 sano jir tahay sidayda, waxaa jiray laba arimood oo ku saabsanaa. Midi waxay ahayd in uu Man United kaga baxay 35 sano jir isla markaana uu sheegay in uu ciyaaraha ka fadhiisanayay waxayna aas aas ahaan ahayd in uu dibada u baxo”.
Gary Neville oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi: “Waqtigaas markii uu soo laabtay waxa uu u ciyaarayay manchester City. Uma ciyaari kartid Manchester City. Anigu waxaan ahay taageere United ah isla markaana uma ciyaari karo Manchester City, anigu uma ciyaari karo Leeds, anigu uma ciyaari karo Liverpool. Kaliya taasi dhagax ayay ku qoran tahay, uma ciyaari kartid kooxahaas iyada oo aan la tixgalinayn waxa dhacay”.
Intaa kadib Gary Neville ayaa ka sii hadlayay sababtii uu cadhada ugu sii qaaday goolhaye Peter Schmeichel ee uu salaanta uga qaadi waayay wuxuuna yidhi: “Isagu waxa uu United saddexda koob kula guulaystay 1999 kii, waxa uu sheegay in uu ciyaaraha ka fadhiisanayo, waxaa waajib ku ahayd in uu sii wato ka ciyaarista United ee labadii ama saddexdii sano ee soo socday haddii ay xaaladu sidaas tahay. Waxaanu ku dhibtoonay goolhayaha ee intii u dhexaysay Peter iyo Edwin Van Der Sar”.
Qodobka ugu danbeeya ee Neville uu ku sababeeyay in uu salaanta la dhaafay Peter Schmeichel ayaa ahayd arin kale oo muhiim ah wuxuuna yidhi: “Shayga kale ee waqtigaasi waxa uu ahaa in aan qof kasta necbaa, dhamaantayo sidaas ayaanu samaynay. Qof kastaaba anaga ayuu na necbaa, dhaamaanatyo qof kasta ayaanu necbayn, sidaasi waa qaabkii ay ahayd”.